Maxkamad Kenyaan ah oo sii deysay muwaaddin Soomaali ah oo lagu waayay argagixisanimo - Halbeeg News
Maxkamad Kenyaan ah oo sii deysay muwaaddin Soomaali ah oo lagu waayay argagixisanimo
Sulub Warfaa oo ah ninka Soomaaliga ah ee Maxkamadda laga sii daayay
NAYROOBI(HALBEEG)-Maxkamad ku taalla gobolka Waqooyiga Bari Kenya, ayaa sii deysay nin heysta dhalashada Newzealand asal ahaanna kasoo jeeda Soomaaliya, kaasoo la tuhmay in uu ka tirsanyahay ururka al-Shabaab.
Ninkan oo lagu magacaabo Sulub Warfaa ayay ciidamada ammaanku ka shakiyeen kadib markii ay sheegeen in ay ku arkeen laba baasaboor oo leh magacyo kala duwan.
Markii ay maxkamaddu fasaxday ayuu warbaahinta la hadlay wuxuuna u sheegay in uusan wax xariir ah la lahayn kooxda lagu soo eedeyay in uu ka tirsanyahay. “Inaan Muqdisho ku dhashay macnaheedu ma aha inaan ahay argagixiso,” ayuu yiri Sulub. “Aad baan ugu faraxsanahay in xorriyaddeydii dib la iigu soo celiyo caddaaladdana la i marsiiyay” ayuu sii raaciyay.
Laamaha ammaanka Kenya oo agagaarkaas ka waday howl gallo lagu sugayo ammaanka ayaa Sulub iyo toban qof oo kale kasoo qabtay xerada qaxootiga Dhadhaab oo ah xero ay ku jiraan qaxooti badan oo Soomaaliyeed iyaga oo dhammaantood looga shakiyay in ay ka tirsanyihiin al-Shabaab.
Ololaha lagu adkeynayo ammaanka ee ay samaynayaan ciidamada Kenya ayaa ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday hotel Dusit ee bartamaha magaalada Nayroobi kaasoo ay masuuliyaddiisa sheegatay al-Shabaab.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare: Garsoorku horumar weynbuu sameeyay sanadkii tagay